Global Voices teny Malagasy » Libya: Ny mpikarama an’ady Afrikana (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Marsa 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra John Liebhardt Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Angletera, Etazonia, Etiopia, Holandy, Oganda, Fanoherana, Fifindràmonina, Politika, Voina, Vonjy Voina
Iray amin'ny zava-manahirana indrindra ny miresaka azy nandritra ny roa herinandro nanoherana ny Kolonely Muammar Al Gaddafi  any Libya izay dia ny fitateram-baovao fisiana lazain'ny mpitondra Libyana “Mpikarama an'ady Afrikana” ampiasaina hampijoro ny fitondrany efa mihozongozona.
Efa nitantara  ny fisiana mpikarama an'ady avy any Serbia midaroka baomba sivily hatreny amin'ny voromby ny Global Voices. Fa ny ankamaroan'ny tsahotsaho miresaka ny momba ity mpikarama an'ady ity dia mandoko azy ireo ho “vahiny” na “Afrikana” — midika hoe avy any Afrika atsimon'i Sahara sady “Mainty”. Manako na aiza na aiza any amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena,  any amin'ny haino aman-jery arabo , ary any amin'ny fitaovan-tseraseran'olo-tsotra sy amin'ny lahatsary  moa ity tantara ity.
Maninona no mametraka endrika mainty amin'ity tantarana mpikarama an'ady ity nefa fantatra fa ny mponina any Libya dia sady misy mazava no misy matroka ny volo-kodiny ?
Ao amin'ny taratasy misokatra ho an'ny Al Jazeera navoakany tao amin'ny bolongana Sky, Soil & Everything In Between, i KonWomyn no manahy ny fomba fanatsoran'ny mpitantara ny fanazavazavana ho “mpikarama am'ady avy any Afrika” , tsy mikaroka lalina kokoa hoe iza tokoa moa ireo olona ireo, ary iny fomba fanazavazavana iny no arahin'ny haino aman-jery manerantany.
Ny antony hafa mahatonga ity resaka ity miparitaka fatratra ihany koa dia noho ny tahotra. Ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'izay voasoratra ao amin'ny bolongana Arabist.net no anoratan'i  “Benedict” momba ity mpikarama an'ady vahiny ity:
Ao anatin'ny tontolo anjakan'ny tahotra sy ny tsy fahazoam-baovao loatra no miely ny tsaho fisiana olo-tsy fantatra loatra (ohatra ny tsaho momba ny ‘Arabo’ midaroka ny mpanao fihetsiketsehana tany Iran tamin'ny 2009). Faharoa, betsaka ny mpifindra monina Afrikana any Libya izay mety hataon'ny vahoaka tezitra [sorona] olona faniliham-pahadisoana, nefa misy koa ny Libyana mainty, ary ny sasany amin'ireny dia mety ho mpitandro ny filaminana.
Na izany aza, ireo mpikarama an'ady any Libya tratra rehefa alaina ny taratasy momba azy dia hita fa avy any Tonizia, Nigeria ary Ginea (Conakry)  sy Tchad . Tany Ghana  moa dia nisy ny tsaho fa hotolorana hatramin'ny 2500 dolara amerikana izay olona ao Accra vonona hiady ho an'i Gaddafi. Ny any Ethiopia  ihany koa dia nisy ny tatitra fa nisy nindramina hiady ny olona avy ao. Indro misy lahatsari-na lazaina ho mpikarama an'ady nosamborin'ny mponina tao AL Barqa, Libya.
Saritanin i Libya sy ny ranomasina Mediterranee
Mizotra ho any Libya
Ho an'ny maro any Afrika atsimon'i Sahara, efa hatry ny ela i Libya no nanintona eo amin'ny sehatry ny asa ary nitoetra ihany koa ho fitodian'ny fiantsoana  ho an'ireo izay mitady ny hifindra monina ho any Eoropa manavatsavana ny ranomasina Mediterranee. Hevitreverina ho  1,5 tapitrisa ny olona avy any atsimon'i Sahara no monina any Libya, miasa amin'ny sehatry ny solika sy ny orinasam-panorenana ny ankamaroany.
Miasa miaraka ara-politika sy manampy ara-bola ny governemanta atsimon'i Sahara rahateo i Gaddafi. Efa nanofana vondrona mpioko maro rahateo ny miaramila Libyana taloha, ary efa nanakarama  mpikarama an'ady rehefa nisy nilana izany taloha.
Nandritra ny fotoana voalohany nanjakany ihany koa i Gaddafi izay fantatra sy notonony am-pitiavana ho ny “ Guide ” no niezaka nanambatra sy nanao izay haha-Arabo ny ampaha-tany atsimo indrindra ny tanihain'i Sahara tamin'ny alalan'ny fanerena ny tanora mpifindra monina hatrany Sahel ka hatrany Pakistan hiady  ho toy ny andia-tafika tokana tany amin'ny ady nitranga tany Tchad, Uganda, Palestina, Libanona ary Syria.
Fanafihana mpifindra monina
Ny olana hita avy hatrany dia tafihin'ny  olona any Libya izay hita fa avy any Afrika atsimon'i Sahara satria raofiny ho mpikarama an'ady. Ao amin'ny bolongana mpanao tamberina Ethiopiana , maro ny mamosa-kevitra ao amin'ny lahatsoratra iray miresaka mpikarama an'ady Ethiopiana  ahitana ahiahy fandrao asaritaky ny mpanao fihetsiketsehana ny mpifindra monina tsy manantsiny.
Hoy ny nosoratan'ny  mpamosa-kevitra iray “Ganamo” :
Mety ho mpifindra monina tsy manantsiny ny sasany amin'ireo. Mandritra ny fitroarana moa tsy ao an-tsain'ny olona loatra matetika ny manavaka ny vahiny mahavita heloka sy ny vahiny tsy manantsiny. Tsy maintsy milaza iany aho satria nianarako avy tamin'ny zavatra efa niainana. Tokony hitandrina mafy isika rehefa mandeha ny revolisiona hiaro ny mpifindra monina. Indrindra moa ny Ethiopiana am-pielezana noho ny mpitondra ao tsy miraharaha afa-tsy ny volany ihany ary mandao ireo mpifindra monina ireo ao anatin'ny fotoan-tsarotra, raha manavotra ny olom-pireneny kosa ny firenen-kafa. Aiza no handehanan'ny mpifindra monina Ethiopiana eto Libya?
Hitan'ny mpamaham-bolongana sy ny mpazoto an-tserasera sasany avy any Afrika atsimon'i Sahara ho varavarana misokatra ho amin'ny fitiavan-tanindrazana [diso toerana?] avy amin'ireo avy any Afrika Avaratra ity resaka mpikarama an'ady ity.
Ao amin'ny bolongana pan-Afrikana i N Thompson no manoratra :
Nanohana sy niray fo tamin'ny fanirian'ny Ejipsiana sy ny Toniziana nandritra ny fihetsiketsehana ny Afrikana tamin'ny ankapobeny. Na izany aza dia manomboka manontany tena ny haino aman-jery Afrikana sy ny any amin'ny fanaovana dinika an-tserasera any amin'ity fanasongadinana izay lazaina ho mpikarama an'ady Afrikana mandroba sy manao an-keriny ny mpanao fihetsiketsehana ity ka manomboka mahaliana izay tena ao an-dohan'ny mpanao fihetsiketsehana Libyana sasantsasany.
Ao amin'ny Sudan.net dia niteraka valinteny nampihetsi-po ny fanontaniana natrangan'ny mpikambana iray manao hoe – Mpanavakavana ve i Libya? Moa ve tsy lalàna voalohan'ny revolisiona ny maka fanohanana iraisam-pirenena araka izay tratra?
Nataon'i Tommy Miles any New York nanako izany eritreritra izany, tamin'ny nanoratany  resaka niompana amin'i Afrika Andrefana, Tomathan blog:
Amin'ny fahatsoratra rehetra no ilazako fa manohana ny zon'ny vahoaka ho tezitra amin'ny fitondran'i Gaddafi aho. Tsy dia sarotra loatra ny haminavina amin'izany fa hahomby ry zareo, ary ho mari-toerana kokoa iny faritra iray manontolo (ahitana an'i Tchad, Mali ary Niger) iny tsy misy an'i Gaddafi izay manakorontana matetika ny Afrikana mpifanolo-bodi-rindrina aminy.
Saingy mihoatra noho ny any Afrika Avaratra dia efa voarakitry ny tantara hatry ny ela ny tahotra, fankahalana ary ny fanaovana tsindrio fa lavo miankina amin'ny volon-koditra. Miavaka tsara, any, ny “mainty” vitsy an'isa izay taranaka andevo izany hoe ambanimbanian'ny sasany hatrany izy ireny, raha misy ny mpialokaloka noho ny antony ara-politika sy ara-toekarena ao amin'ity firenena azo lazaina fa manankarena ity ihany.
Hoy ny mpamosa-kevitra iray amin'ity lahatsoratra ity, mitondra ny anarana hoe “Arabo”, tsy mitovy hevitra amin'izay voasoratra :
Fampiadian-kevitra noforonina fotsiny. Nitatitra ihany koa ny Libyana fa misy mpikarama an'ady Eoropeana ary toa mifanaraka ny hanadino izany ianareo satria tsy mifanaraka amin'ny fanavakavahana tianareo avoitra. Ny teboka hahalalana azy ireo fa Afrikana izy ireo dia amin'ny alalan'ny famantarana, tsy misy idiran'ny volon-koditra mihitsy ( avy amin'ny fomba fijery mitongilana Tandrefana) fa amin'ny alalan'ny loza mitatao (miankina amin'ny fiteny, “Afrikana” rehefa voamarika fa tsy miteny arabo ilay olona avy eto amin'ny kaontinanta fa tsy ilay olona mainty izay eritreretinao). Ny Libyana no mahafantatra kokoa fa misy Libyana mamono azy, rehefa fantatra fa tsy ny mpikarama an'ady no manamory ny voromby mpiady, ary tsy vahiny ihany koa ny vondro-tafika tarihan'ny zanak'i Gaddafi io. Manampy ny tenanao kosa ianao amin'izao fotoan-tsarotra andalovan'ny vahoaka Libyana izao, ny mangina mandrapahafantatrao ny tranga rehetra, fa tsy manery ny fandaharam-potoana hanompa ny vahoaka miady sy maty ho amin'ny fahafahany izay miorina amin'ny eritreritra mandalo fotsiny ihany.
Mamindra fo amin'ny mpikarama an'ady sasany voasambotra ihany koa ny vahoaka any Libya. Ity lahatsary manaraka dia mampiseho olona mihoatra ny iray miaro ny lazaina ho mpiady amin'ny hatezeram-bahoaka (Fampitandremana: sary mety hanohina).
Mpikarama an'ady tanora iray avy any Tchad no milaza ao anaty resadresaka nifanaovana tamina gazety anglisy The Telegraph  fa nisy olona nihaona taminy nilaza fa tian'izy ireo halefany hiasa any Libya izy. Nefa naodina ho any Al-Bayda ny voromby, tao izy sy ny niara-dia taminy no nomena fitaovam-piadiana ary nobaikoana hamono ny mpanao fihetsiketsehana.
Ny bolongan'i Ridja avy amin'ny nosy Komoro  eto Afrika no nandray ity , nandray ity lohahevitra ity  [Fr]:
Tanaty lahatsary nivoaka tao amin'ny YouTube, lehilahy mainty iray, nambara ho mpikaram an'ady, nanaiky ka nalain'i Khamis, zanaka lahin'ny Guide, handripaka ny olona. Tena fiaken-keloka ve sa fitadiavan'ilay olona hamonjy ny tenany tsy hosaritahan'ny olona? Sarimihetsika hafa hita amin'ny aterineto mampiseho ny sisan'ny lazaina ho zary lasa miaramila maty an'ady. Ny vohikalan'ny Libyana an-tsesintany ihany koa dia milaza ireo miaramila vahiny, mampahatsihy ny tsaho miely indrindra, fa mikarama $30.000 Amerikana.
Vincent Harris ao amin'ny bolongana Colored Opinions, bolongana misahana ny politikam-pifindra-monina Afrikana, mitantara  fa manana ny fahadisoany ihany koa ny mpitondra Eoropeana:
Manana andraikitra mavesatra amin'ny fikarakarana ny mpialokaloka any Libya i Eoropa. Mivandravandra ny antony lazaiko, nanao izay hananganana an'i Libya ho faritra fanakanna ny mpifindra monina Afrikana tsy ho tonga any Eoropa ny fitondrana eoropeana, tahaka an'i holandy. Iza no tsy mahatsiaro ny fitsidihana nataon'i Gaddafi tany Italia? Mampihomehy ihany no mahita [an'i Berlusconi] iray amin'ireo filoha mpanavakavaka indrindra mandray an'i Gaddafi, sainy ny tena marina ny fitsidihan'ny filoha Libyana Gaddafi dia ao anatin'ny politika eoropeana indrindra ny fampiasana an'i Libya ho faritra fanalefahana hanoherana ny fifindra-monina.
Iray amin'ny ahiahian'ny maro indrindra, dia ny olana momba ny mpikarama an'ady ity mbola vao eo amin'ny sehatra fanombohana fotsiny. Avy amin'ny bolongana the Arabist  :
Raha mirodana tampoka ny fitondrana, ahoana indray ny hataon'ny mpandimby eo amin'ny fitondrana amin'ireto mpikarama an'ady an'arivony ary fitaovam-piadiana sady tsy voaloa ny karamany mameno ny tanàn-dehiben'i Libya ireto?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/03/13920/
 Kolonely Muammar Al Gaddafi: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Muammar_al-Gaddafi
 haino aman-jery iraisam-pirenena,: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/22/gaddafi-mercenary-force-libya
 haino aman-jery arabo: http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/19/138351.html
 mazava no misy matroka ny volo-kodiny: http://www.afrol.com/articles/37443
 no manahy : http://konwomyn.blogspot.com/2011/02/about-those-african-mercenaries-al.html
 “mpikarama am'ady avy any Afrika”: http://english.aljazeera.net/video/africa/2011/02/2011222165119717549.html
 Tonizia, Nigeria ary Ginea (Conakry): http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8349414/African-mercenaries-in-Libya-nervously-await-their-fate.html
 fitodian'ny fiantsoana: http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/MDCS-8ECDQ5?OpenDocument&cc=lby
 Hevitreverina ho: http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122865814378541.html
 maro ny mamosa-kevitra ao amin'ny lahatsoratra iray miresaka mpikarama an'ady Ethiopiana: http://www.ethiopianreview.com/content/31896#comment-109583
 nosoratan'ny : http://www.ethiopianreview.com/content/31896#comment-109577
 no manoratra: http://www.myweku.com/2011/02/gaddafi-is-killing-us-with-his-african-mercenaries/
 tamin'ny nanoratany: http://tomathon.com/mphp/2011/02/libyas-african-mercenary-problem/
 tsy mitovy hevitra amin'izay voasoratra: http://tomathon.com/mphp/2011/02/libyas-african-mercenary-problem/comment-page-1/#comment-1488
 ity lohahevitra ity: http://ridja.centerblog.net/2246-des-mercenaires-africains-pour-les-basses-oeuvres